मेडिसिटीमा रातभरमै ३ लाखको बिल ! सयको मास्कलाई ५८४ लिइयो (भिडियोसहित) -योहोखबर
मेडिसिटीमा रातभरमै ३ लाखको बिल ! सयको मास्कलाई ५८४ लिइयो (भिडियोसहित)
काठमाडौँ - काठमाडौंको मेडिसिटी अस्पतालले एक रात राखेर उपचार गरेको तीन लाख रुपैयाँ असूलेर नेपालका निजी अस्पताल भनेका कस्ता हुन् भन्ने असली परिचय दिएको छ ।
कोरोना संक्रमण नै नभएका अफताव आलम मिकरानीको रिपोर्ट पोजिटिभ आयो भन्दै मेडिसिटी अस्पतालले तीन लाख रुपैयाँ असूलेको छ । एक रातमा तीन लाख रुपैयाँ उठ्ने गरी के - के चाहिँ उपचार गरियो होला र यति धेरै पैशा उठ्यो ? यो घटनामै परेकाहरुले त बाध्य भएर पैशा तिरिसकेका छन् । तर सुन्नेहरुले भने अहिलेसम्म पत्याइसकेका छैनन् कि निमोनियाका बिरामीको उपचार गर्न एक रातकै तीन लाख रुपैयाँ लाग्छ भन्ने कुरा ।
मेडिसिटीले तीन लाखको ‘बिजुली’ रौतहटका ४७ वर्षीय अफताव आलम मिकरानीमाथि खसाएको हो । मिकरानी भदौ २३ मा मेडिसिटी अस्पताल पुगेका थिए । सामान्य ज्वरो र सास फेर्न समस्या भएपछि उनी भदौ १९ गते कलंकीको नेशनल हस्पिटलमा भर्ना भएका थिए । त्यहाँ मिकरानीको अवस्थामा खासै सुधार नभएपछि उनका आफन्तहरुले राम्रो उपचार सुविधा भएको अस्पताल खोज्दै जाँदा मेडिसिटी अस्पताल पुर्याएका थिए ।
नेशनल हस्पिटलबाट आफैं उठेर हिँड्दै एम्बुलेन्स चढेका मिकरानीलाई मेडिसिटी पुर्याइएपछि त्यहाँका चिकित्सकहरुले ‘बिरामीको अवस्था गम्भीर छ, उहाँलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्छ’ भने ।
२३ गते साँझ मिकरानीलाई मेडिसिटीले भर्ना गर्यो । सोही रात १२ बजे मिकरानीका भाई मुन्नालाई अस्पतालले फोन गरेर –तपाईका दाईलाई कोरोना संक्रमण भएको छ । ’ भन्ने खबर दियो ।
मेडिसिटी अस्पताल नन कोभिड अस्पताल भएका कारण संक्रमित मिकरानीलाई त्यहाँ राखेर उपचार गर्न नमिल्ने भन्दै अस्पतालले अन्त कतै लैजान भन्यो । भदौ २४ गते बिहान मिकरानीलाई अरु नै अस्पताल लैजाने तयारी भयो । मुन्ना पनि आफ्ना दाईलाई लिन मेडिसिटी पुगे । मेडिसिटीले बिरामी अस्पतालबाट निकाल्नु अघि बिल तिर्नुपर्छ भन्दै एक बिल थमायो । बिलमा मुन्नाले २ लाख ९७ हजार ४३२ रुपैयाँ तिर्नु पर्ने देखियो ।
लाखौं बिल उठाउने गरी अस्पताले परीक्षणहरु रातरात भर नसुती गरेको देखिन्छ । यति गरेर अस्पताल बिल धेरै उठाउन त सफल भयो, तर निमोनिया पत्ता लगाउन सफल भएन । थप जानकारीका लागि भिडियो हेर्नुहोस् ।
५ दिन अघि २०७७ भाद्र ३० ०८:०० मा प्रकाशित